२८८० को बलियो रेसिस्टेन्स भोलुम सहित ब्रेक, विक्ली चार्टले दियो नेप्से बुलिश भएको कन्फरमेसन ! - Arthasansar
आइतबार, ०२ माघ २०७८, १७ : ०२ मा प्रकाशित
माघ महिनाको पहिलो कारोबार दिन आज आइतबारका दिन सेयर बजारमा उछाल आएको छ। आज नेप्से परिसूचक ६९ अंकले बढ्दै २९२६.७५ को बिन्दुमा क्लोज भएको छ। कारोबार रकमको आधारमा आजको दिन बिशेष रह्यो। धेरै समयपछि नेप्सेमा ९ अर्ब भन्दा माथिको कारोबार भएको हो। बजार उच्च अंकले बढ्दै गर्दा कारोबार रकम पनि बढ्नुले बजारमा उच्च खरिद चाप रहेको संकेत गर्दछ।
प्राविधिक रुपमा हेर्दा कस्तो देखियो ?
डेली चार्टको आधारमा:
नेप्सेमा आज सानो विक (Wick) सहितको बुलिश मारुबोजु क्यान्डल बनेको छ। बुलिश मारुबोजु क्यान्डलले बजारमा उच्च खरिद चाप रहेको संकेत गर्दछ। यसले आगामी दिनमा बजार अझ बढेर जाने संकेत पनि गर्दछ। बुलिश मारुबोजु क्यान्डल बन्दै गर्दा करिब ९ अर्ब ६७ करोडको उत्साहजनक कारोबार हुनुलाइ प्राविधिक विश्लेषणमा अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिने गरिन्छ।
RSI धेरै पछि ७० भन्दा माथि गएको छ। आज RSI ७२.३३ को लेभलमा छ। RSI ७० भन्दा माथि रहनुले बजारको अप ट्रेन्ड बलियो रहेको जनाउँछ।
डेली क्यान्डलमा MACD ले नेप्से २४२० बाट माथि लाग्दै गर्दा नै गोल्डेन क्रसओभर दिइसकेको थियो। अहिले MACD का हिस्टोग्रामहरु लामालामा हुँदै गइरहेका छन। हिस्टोग्रामहरु लामा लामा हुँदै जानुले बजारमा खरिद चाप बढ्दै गएको संकेत गर्दछ।
बुलिंगर ब्याण्डको अपर ब्याण्ड संगसंगै क्यान्डलहरु बनिरहेको देखिन्छ। बुलिंगर ब्याण्ड विड्थ पनि माथितिर नै लागिरहेको छ । यसले बजारको बुलिश यात्राको संकेत गरेको छ।
DMI इन्डिकेटरलाइ भरपर्दो इन्डिकेटरको रुपमा लिइन्छ। +DI लाइनले -DI लाइनलाई तलबाट काटेर माथितिर लागिसकेको छ र ADX ३१ भन्दा माथि पुगिसकेको छ। ३० माथिको ADX ले स्ट्रंग ट्रेन्डको संकेत गर्दछ। यसले बजार अझै बढेर माथि जानसक्ने संकेत गरेको छ।
साप्ताहिक (विक्ली) रुपमा हेर्दा कस्तो देखियो ?
३२२८ बाट नेप्से खस्दै गर्दा नेप्सेको विक्ली चार्टमा MACD ले डेड क्रस ओभर दिएको थियो। त्यसपछि बजारमा उतार चढाव हुँदै बजार २२५५ को बिन्दुसम्म झर्यो। यसक्रममा नेप्से लगातार घटेको होइन, बीच बीचमा बढेको पनि थियो। तर त्यसरी बढ्दा नेप्सेको विक्ली MACD मा गोल्डेन क्रसओभर हुन सकेको थिएन। यसअघिका हप्ताहरुमा लगातार नेप्से बढ्दा पनि MACD ले गोल्डेन क्रस ओभर दिन सकेको थिएन ।
आज आइतबार यो हप्ताको पहिलो दिनको कारोबार हुँदै गर्दा बजार उच्च अंकले बढेपछि नेप्सेको विक्ली चार्टमा MACD ले गोल्डेन क्रसओभर दिएको छ। विक्ली चार्टमा MACD ले गोल्डेन क्रसओभर दिनु एकदमै सकारात्मक कुरा हो। यसले अब बजारको यात्रा बुलिश हुने स्पष्ट संकेत गरेको छ।
त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण कुरा आज बजार बढ्दै गर्दा सुपरट्रेन्ड (Length 10 ; Factor 3) इन्डिकेटर पनि हरियोमा परिणत भएको छ। सुपरट्रेन्डलाइ एकदम विश्वसनीय इन्डिकेटरको रुपमा लिइन्छ। यसले बाइ सिग्नल दिइसकेपछि बजार बढेर नै जाने गरेको प्रशस्तै उदाहरणहरु छन।
यसअघि नेप्से ३२२८ को बिन्दुबाट झर्ने क्रममा २८२० भन्दा तल खस्दै गर्दा नेप्सेको विक्ली चार्टमा सुपरट्रेन्डको लाइन हरियोबाट रातोमा परिणत भएको थियो जसले बजार अब अझै खस्नेछ भन्ने संकेत गरेको थियो। आज बजार २९०० बाट उकालो लाग्दै गर्दा पुन: विक्ली चार्टमा सुपरट्रेन्डको लाइन रातोबाट हरियोमा परिणत भएको छ जसले बजार अब अझै बढ्ने संकेत गरेको छ।